Éric Abidal oo ka warbixiyay in kooxda Barcelona ay aflagaado kala kulantay xidigaha Man United Finalkii Champions League 2011-kii – Gool FM
Éric Abidal oo ka warbixiyay in kooxda Barcelona ay aflagaado kala kulantay xidigaha Man United Finalkii Champions League 2011-kii
Dajiye July 27, 2018
(Barcelona) 27 Luulyo 2018. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Barcelona Éric Abidal ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xanaaqii kooxda Manchester United intii lagu jiray finalkii Champions League ee 2011-kii ee ka dhacay garoonka Wembley.
Barcelona ayaa ku guuleysatay koobkeedii shanaad ee Champions League sanadii 2011-kii , kadib markii ay Manchester United kaga guuleysteen markii labaad xiriir ah.
Kooxda reer Spain ayaa funalka koowaad kaga guuleysteen Manchester United sanadii 2009 magaalada Roma, halka finalka labaad ay markale kaga guuleysteen London sanadii 2011-kii.
Éric Abidal oo dib u xasuustay finalkii Champions League-ka ay la ciyaareen koooxda Manchester United ayaa sheegay in markii ugu horeesay ciyaartoyda United ay ka caroodeen kubad xakameynta xidigaha Barcelona iyo daba ceyrsigooda kubada si ay u helaan.
Abidal ayaa sheegay in taasi ay keentay inay caroodaan isla markaana ay si xoogan u caaytamaan sababa la xiriira awood la’aanta wiilasha Red Devils si ay ula socdaan awooda ciyaartoyda Barca.
“Waxyaabaha aan in badan ka xasuusto finalka ayaa ah in 30-a daqiiqa ugu horeeyay ay xaalada ahayd mid kacsan, sababtoo ah ciyaartoyda Ingariisku waxay ahaayeen kuwo careysan”.
“Ciyaartoyda Manchester United waxa ay sameeyeen caay fara badan iyagoo qeylinaya, waxay ahayd wax aan la rumeysan karin”.
“Qaar ka mid ah saaxiibadey ma aysan fahmin erayda ay ku caatamayeen xidigaha kooxda Manchester United, laakiin aniga waan fahmay, waxay dhahayeen, nagu filan”.
“Joogsada lacnad ha idunku dhacdee, waan dhimanay sidaan gadaashiin u daba ordeenay, walina waxaa dhiman 25 daqiiqo”.
Barcelona oo qaaday tilaab shaki galinaysa mustaqbalka Yerry Mina